Ihostele iLayos Toledo, iGumbi eliPhakathi elineebhedi ezimbini
Layos - Toledo, Spain
Igumbi lakho lokulala e ihostela sinombuki zindwendwe onguHostel Layos
Ihostele iLayos Toledo yeyona hostele ifanelekileyo kwiintsapho, izibini, izihlobo okanye amaqela esikolo afuna ukujikeleza ngendalo kwaye afune ukonwabela ngaphandle nayo yonke into enokunikwa liphondo laseToledo. Utyelelo lwenkcubeko kwisixeko esimangalisayo saseToledo okanye kwipaki yomxholo wePou de Fou, ukuqubha echibini ngexesha lonyaka okanye ekwindla ukukhwela ihashe phakathi kwemithi yomnquma. Indawo yokuphumla, yokuphumla kwaye yonwabele yonke imidlalo onokuthi uzilolonge kuyo kumaziko ethu.
I-Hostel Layos ineendawo ezahlukeneyo eziqhelekileyo ukuze zonke iindwendwe zifumane indawo yazo. Igadi enkulu eneenkundla zemidlalo, ichibi lokuqubha, amagumbi okuphumla ahlukeneyo kunye namagumbi okufundela oomasifundisane kunye nemisebenzi yeqela kunye noqhagamshelo lwe-Wi-Fi yasimahla kulo lonke ukusekwa.
Amagumbi kunye neApartment:
Ihostele iLayos inikezela ngamagumbi abanzi kwaye aqaqambileyo. Sinamagumbi asemgangathweni anegumbi lokuhlambela labucala kubantu ababini, abathathu okanye abane abaneebhedi ezingatshatanga. Amagumbi oSapho asemgangathweni aneebhedi ezintathu zokuhlalisa ukuya kuthi ga kwisithandathu esinegumbi lokuhlambela labucala kunye neSuperior Duplex Rooms ezilungele iintsapho. Kananjalo sinamagumbi ohlahlo lwabiwo-mali abucala anegumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo ukuhlalisa abantu ababini ukuya kwabathandathu.
Onke amagumbi anezifudumezi kunye namanzi ashushu, amagumbi ahlukeneyo okwabelwana ngawo kunye negadi enkulu enedama lokuqubha kunye neenkundla zemidlalo ukuze zonke iindwendwe zifumane indawo yazo.
I-Hostel Camp Castillo de Layos inokuvalwa ngokugcinwa kwiqela kwaye ibe yindawo ye-PRIVATE ukuze umxhasi aphuhlise isiganeko esenziwe ngokwezifiso.
Iziko liseLayos, idolophu encinci, ebekwe ngobuchule kumbindi wepeninsula ejikelezwe yimithi yomnquma kunye nembonakalo yomhlaba ebonakalisa indawo kaDon Quixote.
Isixeko saseToledo iikhilomitha ezimbalwa kunye nezinto ezininzi ezinokunikela. Utyelelo lwenkcubeko, igastronomy ekhethekileyo kunye neeterras ukonwabela ukutshona kwelanga ubukele isixeko samaxesha aphakathi okanye iintlambo zaseBurujon. . Kufuphi kakhulu kwiHostele yaseLayos sinePou de Fou Theme Park enemidlalo emangalisayo kubantwana nakubantu abadala.
Ungandwendwela i-mills ye-Consuegra okanye i-Aranjuez 40km kude kunye ne-Madrid i-80km kude.Naziphi na kuzo ziinketho ezilungileyo kubakhenkethi kunye nomdla wenkcubeko.
Idolophu ibonakaliswe yi-gastronomy elungileyo, ukuhamba okukhangayo kunye nokubanakho ukwenza imidlalo kwindawo evulekileyo.
I Guajaraz dama, nebhotwe 15 ngenkulungwane ye Bala ka Mora, igalufa, bekhwele emahasheni, utyelelo kwi Cabañeros National Park, okanye indibanisela imisebenzi, apho ehostele ngokwayo onokuzenza ukuba lulungele wena, izizathu ngokobunzima ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Hostel Layos
Ihostele inolwamkelo oluvulwa ukusuka ngo-9 kusasa ukuya kweye-19 emva kwemini kwaye uVanesa okanye uPablo baya kubakho ukuze bakufumane kwaye bakuncede ngayo yonke into oyifunayo. Kuhlala kukho ifowuni esebenzayo ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Ihostele inolwamkelo oluvulwa ukusuka ngo-9 kusasa ukuya kweye-19 emva kwemini kwaye uVanesa okanye uPablo baya kubakho ukuze bakufumane kwaye bakuncede ngayo yonke into oyifunayo.…